Imbeleko – The Ulwazi Programme
Imbeleko nokubikwa emadlozini
Le ndatshana ishicelelwe ngu-Mike Msani, yahlelwa ngu-Nkosikhona Duma “Isiko lwafika kuqala kunokukholwa kwama Krestu – ngibona sengathi sesalilahla isiko,” kusho uMxolisi Mkhwanazi ebukeka sengathi unengekile ebusweni. UMxolisi waseMagabeni Township eningizimu yeTheku emavikini amane adlula wenzelwa usiko lwembeleko kanye nesiko lokumubika emadlozini akubo. Lamasiko ngokusho kwakhe abalulekile nangokuba avuselela ukuxhumana okungcono namadlozi akini futhi aze akwazi ukuthi … Read more
Categories Culture Tags amazulu, Imbeleko, ukubikwa
Ngokosiko lesiZulu umntwana ozelwe uyisibusiso esivela kwabalele, okungamadlozi nakuMvelinqangi. Kungakho kumele enzelwe isiphandla noma imbeleko ukuze abikwe kuwona amadlozi okunenkolelo yokuthi asondelene noNkulunkulu. Isiphandla sitshengisa isiko lokumamukela kanti inyongo achelwa ngayo iwuphawu lokumxhumanisa namadlozi omndeni ukuze aziwe futhi avikeleke. Lomsebenzi wenziwa kubo kwengane (kubokababa) kodwa kuyenzeka kuhluke ukwenza ngezibongo, abanye bathi ingane yokuqala yenzelwa kubo kwayo nasekhaya konina. Umntwana angahlupha … Read more
Categories Culture Tags amasiko, Imbeleko, Imicimbi yesintu, isiphandla, Traditional Ceremonies